DEG DEG:(Dhagayso)Jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq oo madaafiicda la isku diyaarsaday & dagaalkii ugu cuslaa oo……. | Puntland
DEG DEG:(Dhagayso)Jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq oo madaafiicda la isku diyaarsaday & dagaalkii ugu cuslaa oo…….
Wararka naga soo gaaraya jiidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in cabsidii ugu badneyd ay saakay ka jirto jiidaha dagaalka, waxaana laga maqlayaa Madaafiic xoogan oo ay is weydaarsanayaan.
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog badan ayaa laga dareemayaa jiidaha dagaalka, waxaana cabsida ay soo korortay markii ay Puntland si cad u sheegtay in aysan waxba wada hadal ah kula jirin Somaliland, halka maamulka Hargeysana ay talaabadaas horey u shaaciyeen.
Ciidamada labada dhinac ayaa iskugu guuray meelaha qaarkood, waxaana la dareemayaa xiisadda oo sii kordhaysa iyadoo ay saraakiisha qaarkood ka gaabsadeen in ay faahfaahin dheeraad ah bixiyaan.
Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ay ilaa 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamadii ugu badnaa ay yimaadeen jiidahan dagaalka, sidaas oo kale Somaliland ayaa u muuqata mid dib ugu soo celisay deegaanka Tukaraq hub ay horey uga saartay.
Halkaan Ka Dhegeyso Codka Wasiirka.